Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka oo maanta kormeeray xarunta Golaha Shacabka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka oo maanta kormeeray xarunta Golaha Shacabka “SAWIRRO”
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka JFS Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo ay wehliyaan Guddoomiye kuxigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad C/lla Cawad iyo xoghaayaha guud ee golaha ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta Golaha Shacabka oo ay soo kormeereen qeybaha xarunta ay ka koobantahay.
Waxay mid mid u booqdeen xafiiska waaxyaha kala duwan ee Golaha Shacabka, iyagoo xafiis walbana qofka mas’uulka ka ah uu Guddoomiyaha uga warbixinayay howlaha uu haayo, waxaana Guddoomiyaha la socday Injineero qiimeynaya dib u dayactirka lagu sameynayo xarunta.
Sidoo kale Guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa isla xarunta kulan isugu jirtay isbarasho iyo ogaansho xaalada shaqada Golaha kula qaatay howl wadeenada Golaha Shacabka, waxaana Gudoomiye kuxigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad C/lla Cawad oo kulanka ka hadlay uu uga warbixiyay Guddoomiyaha shaqada howlwadeenada oo uu aad u amaanay, wuxuuna tilmaamay in ay yihiin laf dhabarta Golaha Shacabka ayna ku shaqeeyaan duruufo kala duwan.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa ku ammaanay howl wadeenada Golaha Shacabka shaqada ay golaha u hayaan, isagoo uga mahad celiyay u adeegida qaranka iyagoo waliba duruufo adag kusoo shaqeeyay.
Guddoomiye Maxamed Mursal ayaa u balan qaaday shaqaalaha in qof walba xuquuqdiisa siduu u heli jiray u heli doono, wixii kale oo xuquuq ah oo ay leeyihiina ay heli doonaan, waxaana Guddoomiyaha sidoo kale uu sheegay in Golaha uu yeelan doono xarun caafimaad oo golaha shacabka u gaar ah.
Degmada Xudur oo laga bilaabayo Bixinta Talaalka Boolyada
Guddiga joogtada ah ee Golaha Aqalka sare oo maanta arrimo muhiim ah ka hadlay+Sawirro